(Myanmar) အချိန်ပိုင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည့်အစီအစဉ်
(Myanmar) အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပထမနှစ် BBM, BA(EPP), BTHM, BA(Journalism) ဝင်ခွင့်များ စတင်လက်ခံခြင်းအစီအစဉ်
(Myanmar) NMDC မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တဲ့Open Campus: Your College, Your Future ပညာရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနား
Hi NMDC students! Are you graduating soon and looking forafun and exciting career withaglobal company? Come join us at your National Management Degree College (NMDC) at 1pm to 3pm on 1st August 2018! Here’s your chance to [...]
Published by Su Myat Thu · 19 August 2017 · BBM (Bachelor of Business Management) နဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ “စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ” ဘွဲ့ပါ။ အနည်းငယ်ရှည်ပေမယ့် ကျောင်းသားတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ BBM (Bachelor of Business Management) ဘွဲ့ဟာဆိုရင် NMDCနဲ့ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်း ၂ကျောင်း တွဲဖက် affiliate ပြုလုပ်ပြီးပေးတဲ့ ဘွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် NMDC မှာ ကျောင်းတက်ပြီး စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ အပ်နှင်းတဲ့ ဘွဲ့ကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလကတော့ (၄)နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ *Specialized Subjects* BBM မှာ အဓိကသင်ကြားပေးတာကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုစတင်ထူထောင်မယ်၊ ထူထောင်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ် ဆိုတာတွေပါပဲ။ ရှိနေတဲ့ [...]
B.A (EPP) ဆိုတာ “အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်” (National Management Degree College)နဲ့ “ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာဌာန” တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရှည်ကတော့ Bachelor of Arts (English for Professional Purposes) ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုပြောရင် “လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စာ၊ သက်မွေး အင်္ဂလိပ်စာ” လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ EPP လို့ပြောလိုက်ရင် အင်္ဂလိပ်စာ သီးသန့့်သင်တဲ့ English major နဲ့အတူတူပဲလို့ထင်လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ EPP ဟာ Business [...]
Tourism Management နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ Introduction to Tourism, Tourism Planning and Product Development, Destination Management and Marketing ဘာသာရပ်တွေ၊ Hospitality Management နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Resort and Spa Hotel Management, Facilities Management, Room Division Management အစရှိတဲ့ဘာသာတွေအပြင် Management နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ၊ English for Tourism, English for Hospitality [...]